Global Voices teny Malagasy » Mijery ny mari-panondroana Indo miaraka amin’ilay mpaka sary Holandey, Ello · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Janoary 2019 8:26 GMT 1	 · Mpanoratra Juke Carolina Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Holandy, Indonezia, Foko sy Fiaviana, Mediam-bahoaka, Saripika, Zavakanto & Kolontsaina
Ny tetikasa Hoezo Indo mitrandraka ny mari-panondroana olona manana lova Indoneziana-Eoropeana mifangaro. Saripikan'i Armando Ello. Nahazoana alalana.
Mpaka sary Armando Ello dia anisan'ireo Indos roa tapitrisa ao Holandy izay nihalehibe tamin'ny fahalalàna kely momba ny maha-indo azy ireo.
Ny Indo dia olona manana fototra Indoneziana sy Eoropeana (indrindra indrindra ny Holandey). Manodidina ny roa tapitrisa ireo Indo monina any Holandy, firenena iray izay nanjanaka an'i Indonezia (fantatra taloha hoe India Holandy Atsinanana) ny taona 1600 hatramin'ny 1945. Misy ihany koa ireo Indo any amin'ny firenena hafa toa an'i Aostralia, Etazonia, ary ny maro hafa.
Indoneziana avy any Kupang, Timoro Andrefana ny renin'i Ello, raha Indo kosa ny rainy. Tamin'ny taona 1970, nifindra tany amin'ny faritra avaratr'i Holandy, toerana nahaterahany sy nahalehibe azy ny ray aman-dreniny.
Nanome aingam-panahy azy mba hitrandraka sy hampiroborobo ny lova Indo sy ny mari-panondroany amin'ny alàlan'ny tetikasa hamoaka boky iray antsoina hoe Twijfelindo (midika hoe “indo feno fisalasalana” amin'ny teny holandey) ny fitiavany tantara sy sary. Nivoaka tamin'ny taona 2016 ary nasongadin'ny National Geographic Netherlands.Ahitana sary sy antsafa niarahana amin'ireo Indos miisa 277 ny ‘Twijfelindo’.
Notarihan'ny fanehoan-kevitra azony momba ity boky ity, nirotsaka tamin'ny tetikasa an-tsary vaovao antsoina hoe Hoezo Indo izy, izay mikendry ny hanasongadinana ireo Indos monina any amin'ny faritra maro manerantany.
Niresadresaka tamin'i Ello tamin'ny alàlan'ny mailaka momba ity tetikasa  ity sy ny fikarohana momba ny mari-panondroana maha-indo ny Global Voices.
Global Voices (GV): Inona no dikan'ny hoe Hoezo Indo ary inona no asehon'izany?
Armando Ello (AE): Ny tetikasa Hoezo Indo dia fandinihana lalina kokoa mikasika ny dikan'ny hoe Indo. Ny anaran'ny tetikasa dia midika ara-bakiteny hoe: ‘Inona no tianao holazaina rehefa miteny hoe Indo ianao?’ Izany no fanontanian'ny tanora mikasika ilay antsoina hoe ny fototra niavian'izy ireo. Matetika izy ireo no milaza fa indoneziana amin'ny ampahany, izay marina amin'ny heviny iray, fa ny voambolana hoe Indo dia midika hoe taranaky ny Eoropeana sy vahoaka tompotany izay monina any amin'ny India Atsinanana Holandey (nahafantarana an'i Indonezia taloha). Amin'izany, tsy misy olona afaka mitaky ny ampahany amin'ny lova mifangaro ary mandà ny iray hafa, satria tsy azo atao. Faharoa, ny Indo dia voambolana efa nisy talohan'ny nanaovana an'i Indonezia ho firenena; izany no voambolana ho an'ny olona izay teraka avy amin'ny ray aman-dreny Eoropeana sy tsy Eoropeana. Ny lohatenin'ny tetikasako dia mety ho hafahafa satria [sady azo atao ho fanontaniana koa]. Ny maha-Indo dia matetika tondroina ho maha-Indoneziana, saingy tsy marina izany, farafaharatsiny tsy ho an'ny Indo-Eoropeana voalohany tonga tany Holandy. Rehefa niasa tamin'ny tranokalan'ny tetikasa izahay 10 taona lasa izay dia naheno adihevitra momba ny zavatra rehetra hoe inona izany Indo. Heveriko fa ny olona sy ireo taranaka tanora Indo dia mahita fa manavao zavatra indray ny manontany ny dikan'ny Indo satria nanjary zavatra iray tsy niova intsony ny voambolana.
Sary avy amin'i Armando Ello ihany. Nahazoana alalana.Self-portrait by Armando Ello. Used with permission.
GV: Indo, métisy, kréola, sns. Ahoana ny hevitrao momba ireo teny ampiasaina amin'ny fiarahamonina ireo?
Eto Holandy, saika ny tsirairay no manana fifandraisana Indo, saingy ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahalala na inona na inona momba ny niavian'izy ireo, anisan'izany ny Indos.
Manana traikefa voalohany nandritra ny fiainako manontolo aho. Miaina ao anatin'ny fiarahamonina iray izay mbola mifototra amin'ny fomba fijerin'ny fanjanahantany eo amin'ny tantara isika: ny fandaharam-pianarana ataontsika dia tsy mamelabelatra momba ny fialàna amin'ny fanjanahantany sy ny fiantraikan'ny fanjanahana an'i Indonezia teo amin'i Indonezia sy Holandy.
Izany no mahatonga ahy mahita olona miha-maro hatrany miezaka mamantatra sy manao fikarohana momba ity lohahevitra ity amin'izao fotoana izao, indrindra fa mifototra amin'ny tantaram-pianakaviany manokana. Ny taranaka tanora Indo no mahafantatra kokoa sy manakiana ny adihevitra. Lasa mpisolovava momba ny olana manodidina ny fanjanahan-tany sy ny fanafahana ny zanatany izy ireo noho ny asan'ireo mpahay tantara, menavazana sy ny hafa.
Tsy vitan'ny hoe mila manala ny rafitra fanabeazana voazanaka isika, fa ny tena zava-dehibe dia mila fiovana eo amin'ny fomba fisainantsika isika. Noho ny fahatsapana tsy mitsaha-mitombo, dia mila manova ny fomba fisainantsika manokana isika.
Tsy azontsika antenaina hahafantatra ny dikan'ny teny hoe Indo ny fiarahamonina, ka tsy maintsy manazava sy mampianatra izany isika manokana. Eto Holandy, miaina anaty fiarahamonina izay mamakivaky tantara sy fandaharam-pianarana Eoropeana miaraka amin'ny fomba fijery tery momba ny tantaran'ny fanjanahantany isika, matetika mba hitazomana ny lazan'ny Holandey. Noho izany dia mahita sy mikaroka manokana amin'ny amin'ny alalan'ny tantaram-pianakaviantsika manokana isika. Ankehitriny, azontsika jerena ny firoborobon'ny taranaka tanora izay manakiana ny adihevitra momba ny fanafahana ny zanatany ary manohana ny fanentanana bebe kokoa ao anatin'ny fiaraha-monina mikasika ny fomba fisainana sy fomba fiainana tsy zanantany .
GV: Momba ny inona ny tetikasanao manaraka (bokintsary tsy misy anarana)?
AE: Ny tetikasako manaraka dia ny fampielezana ny hevitra hoe ny maha-olona ny rà mifangaro izay miaina any amin'ny firenena sy ny fiarahamonina samihafa. Zarao ireo tantara momba ny toerana misy anao, mba hahalalan'ny olona izany. Izany no mahatonga ahy izao haka sary ny olona Indo-Eoropa manerana izao tontolo izao izay manana tantara mitovy.
GV: Lazao anay ny fanantenanao sy ny andrandrainao amin'ny tetikasanao ho avy.
AE: Manantena aho fa ity tetikasa ity dia hanentana momba ny fiaviantsika. Nisy olona iray nilaza tamiko fa ny fototry ny olombelona dia tahaka ny fakan'ny hazo – raha tsy misy azy dia hianjera ilay hazo. Eny, tokony hifantoka amin'ny fanorenana ny hoavintsika isika, saingy tsy afaka ny tsy hiraharaha ny lasa. Ny ankehitriny sy ny hoavintsika dia natsangana tamin'ny lasa. Tokony hamela ny hafa hahita isika hoe iza isika ary manana tantara mahaliana zaraina isika. Mandray ity tetikasa ity mankany amin'ny ambaratonga manaraka aho amin'ny fakana sary sy fanadihadiana Indos isan-karazany manerana izao tontolo izao. Nanomboka fanentanana fanangonam-bola  aho tamin'ity Desambra ity ary hifarana hatramin'ny faran'ny taona. Amin'izao fotoana izao, dia efa nahangona 3 400 Euros mahery tamin'ny 10.000 Euros nandrasana izahay. Hamatsy ny boky sy ny fitsangatsanganana an-tsariko mba hihaonana amin'ireo olona izay ho aseho amin'ny boky izany.
Ny tetikasa dia ahitana sary miaraka amin'ny tantara fohy. Ankoatra izay, mikasa hanao fampiratiana sary mitety tany aho ary nanao lahatsary fanadihadiana mifantoka amin'ity tetikasa ho avy ity. Tena manantena aho fa hahita Indo-Eoropeanina bebe kokoa, indrindra any amin'ireo firenena izay tsy noheveriko loatra.
Ireto misy sasantsasany avy amin'ny tetikasan-tsarin'i Ello tamin'ny taona 2016:
Tetikasa Hoezo Indo mijery ny maha-izy ny olona miaraka amin'ny lova Indoneziana-Eoropeana mifangaro. Saripikan'i Armando Ello, nahazoana alalana
Tetikasa Hoezo Indo mijery ny maha-izy ny olona manana lova Indoneziana-Eoropeana mifangaro. Sary avy amin'i Armando Ello, nahazoana alalana.
Bokin-tsary Twijfelindo navoaka tamin'ny taona 2016. Sary avy amin'i Armando Ello, nahazoana alalana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/12/132522/
 Hoezo Indo : https://www.facebook.com/hoezoindo/